Ireto ny 6 safidy tsara indrindra amin'ny My Bookmarks | Vaovao momba ny gadget
Solony hafa amin'ny maripeoko
Ireo rehetra izay tia fanatanjahan-tena ary te hahalala ireo valiny samihafa vokarina isan'andro, matetika dia manana ny tranonkala ho referansa ny bookmark.com, izay ahitantsika valiny mivantana be dia be ary fantatsika ihany koa ny fanasokajiana an'ireo ligy isan-karazany, ny latabatra esorina sy ny fampahalalana marobe izay azo alefa haingana sy mora.
Mety mijery ny tranonkala tsara indrindra amin'ity karazana ity isika, fa tsy io irery ihany no azontsika atao foana ny mijery sy manana an-tanana. Noho izany antony izany anio dia hasehontsika anao mandritra ity lahatsoratra ity ny fifandimbiasana tsara kokoa amin'ny My Bookmarks, raha sanatria ka tsy hahomby io Baiboly fanatanjahan-tena io indray andro any na raha mila loharanom-baovao faharoa ianao.
1 Fa maninona ny My Bookmarks no jerena ho an'ny rehetra?
2 isa mivantana
Fa maninona ny My Bookmarks no jerena ho an'ny rehetra?
Nandritra ny fotoana vitsivitsy izao mismarcadores.com dia nanjary tranokala fanondroana ho an'izay rehetra te-hijery vokatra mivantana na koa ireo izay te hahalala fanazavana be dia be momba ny lalao rehetra, saika ny fanatanjahan-tena rehetra.
Alohan'ny hanombohana ny lalao, ohatra ny baolina kitra, azontsika atao ny manamarina ny fanasokajian'ny ekipa amin'ny ligy tsirairay avy, ny lalao teo aloha nilalao, ary koa ny fifanandrinana misy eo amin'izy ireo, ny maty ho an'ny lalao, ny mety maty ary ny fampahalalana fanampiny. Ho an'ireo mpiloka, izay tsy vitsy dia manome koa fampahalalana momba ny fifaninanana alohan'ny lalao sy ny fahalianana hafa.
Raha vao ny lalao, na inona na inona fanatanjahan-tena misy azy ireo, dia mety hisy safidy roa. Ny voalohany amin'izy ireo dia manolotra fampahalalana mivantana ho antsika izy ireo toa izay mitranga amin'ny 90% amin'ireo tranga ireo na manana ny valiny sy fampahalalana fanampiny fotsiny izahay rehefa vita ny lalao. Atorinay anao daholo izao fampahalalana izay mampiseho amintsika rehefa atao lalao mivantana;
Ny habetsaky ny fampahalalana izay omen'ny My Bookmarks antsika, na alohan'ny lalao, rehefa lalaovina, ary amin'ny farany, dia tena sarotra ny mahita amin'ny serivisy hafa amin'ity karazana ity. bebe kokoa iray amin'ireo tombony lehibe ilalaovany dia ny fampahalalana izay omeny amin'ny fotoana rehetra dia tena misy tanteraka ary azo isaina amin'ny rantsan-tànana ny lesoka matetika.
Mazava ho azy, ny My Bookmarks dia misy rindrambaiko azo alaina maimaimpoana, maimaimpoana tanteraka ho an'ny fitaovana misy ny rafitra fiasan'ny iOS sy Android. Amin'ireo tranga roa ireo dia miasa tanteraka izy ary mamela antsika hahafantatra amin'ny fotoana tena misy ny valim-panatanjahantena.
Developer: FlashScore Espana
Ato ambany dia asehonay anao ny safidy tsara indrindra amin'ny My Bookmarks izay hitanay ary amin'ny tranga sasany dia ampiasainay isan'andro;
isa mivantana Iray amin'ireo tranonkala malaza indrindra amin'ity karazana ity izy ary azo antoka fa efa nampiasainao indraindray, na dia talohan'ny nanombohan'ny My Bookmarks aza. Na eo aza ny endriny tsotra, ary indraindray marokoroko, manolotra antsika valiny mivantana be dia be avy amin'ny fanatanjahantena maro samihafa.
Toy ny ankamaroan'ny serivisy amin'ity karazana ity dia manome fampahalalana mivantana momba ny lalao izy, ary matetika dia manitatra azy amin'ny faran'ny lalao io.
Ny safidy tsara hafa amin'ny My Bookmarks dia ny mifidy serivisy mitovy, na dia misy anarana hafa tsy dia samy hafa be aza. Raha mijery ny pikantsary hita eo ambonin'ity lahatsoratra ity ianao dia ho azonao ny zavatra resahina. Ary izany ve valiny.com Kopia izy io, tsy fantatsika raha ara-dalàna na tsy ara-dalàna, ilay tranokala tany am-boalohany izay itadiavantsika vahaolana hafa amin'ity lahatsoratra ity.
Ity tranonkala ity dia miasa mitovy tanteraka amin'ny tany am-boalohany, miaraka amin'ny lafiny iray ihany koa ka mety ho safidy hafa mandritra ny fotoana vitsivitsy izany, na dia ny tolo-kevitray dia ny hijanonanao mivantana amin'ny My Bookmarks fa tsy amin'ny kopia hafahafa.
Miaraka amin'ny famolavolana tena tsotra ary tsy misy enta-mavesatra lehibe nihaona taminay ScoresPro, izay manome vaovao be dia be momba ny fanatanjahan-tena lehibe sy ny ligy lehibe indrindra eto an-tany.
Tsy toy ny ankamaroan'ny serivisy amin'ity karazana ity, ny fampahalalana ary koa ny endriny dia tsotra ary voafetra amin'ny fanomezana antsika ny lalao miaraka amin'ny valiny, ary ny fotoana izay efa lasa, nefa tsy manome antsipiriany bebe kokoa antsika. Noho ny fahatsorany, mety ho tsara ny maka hevitra amin'ireo mpanamory tranonkala finday na raha tsy te hahalala bebe kokoa noho ny valin'ny lalao iray lalaovina izahay.
Vitsy ny serivisy tsoratadidy afaka mahatratra ny haavon'ny My Bookmarks, nefa tsy isalasalana fa iray amin'ireo manakaiky dia akaiky SofaScore. Ary izy io dia manome antsika ny fahafaha-manontany valiny marobe amin'ny valim-panatanjahantena marobe, miaraka amin'ny fampahalalana marobe, fa indrindra amin'ny Tombony izay manolotra kinova faran'izay tsara ho an'ny smartwatches.
Ny fampiharana misy amin'ny Android Wear dia namboarina tamin'ny fikarakarana ny antsipiriany farany rehetra, ary ahafahantsika manana marika eo amin'ny hato-tànantsika izay hahafahantsika mahalala ny valin'ny lalao tadiavinay mivantana.
Sofascore: Score mivantanamaimaim-poana
Betsaka amin'ireo tranonkala mahomby matetika no manana endrika am-pitandremana, izay tian'ny mpampiasa indrindra. Izany no tranga bookmarksonline.com, izay misy a endrika mahafinaritra, mitandrina amin'ny antsipiriany kely indrindra ary manana mpampiasa raikitra marobe noho ity famolavolana ity, fa koa ny fahatsorana hatolony, raha ny amin'ny fampisehoana ny valiny sy ny fitetezana ireo vaovao marobe atolotra azy.
Amin'ny lafiny ratsy dia hitantsika fa tsy afaka mifampiresaka betsaka toy ny amin'ny tranokala hafa izahay, ary izany dia voafetra ihany amin'ny fanomezana vaovao momba ny fanatanjahantena vitsivitsy, sy amin'ireo ligy iraisam-pirenena mifandraika amin'izany. Raha te hitady valiny avy amin'ny ligy tsy fantatry ny besinimaro ianao na ny valin'ny fanatanjahantena any aoriana, tsy anjaranao io.
Raha tsy liana amin'ny valin'ny tontolon'ny baolina kitra fotsiny isika, dia mety ho loharanom-pahalalana lehibe iray pejy ofisialy FIFA sy UEFA. Raha ity farany dia manara-maso akaiky ny lalao mivantana marobe amin'ny alàlan'ny rohy manaraka.
Ny iray amin'ireo tombony lehibe amin'ity serivisy ity dia ny fampisehoana amintsika ny fampahalalana ofisialy amin'ny fotoana rehetra ary ohatra amin'ny tranga scorers dia tsy misy ny fifanakalozan-kevitra.
Pejy na rindranasa inona avy no anadinanao isan'andro ho solon'ny My Bookmarks?. Lazao aminay ao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay ary raha tsy misy zavatra manan-danja lehibe izahay dia ampianay eto amin'ity lisitra ity mba hahafahantsika rehetra manana ny mombamomba ny fanatanjahan-tena mivantana. .
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Solony hafa amin'ny maripeoko
Nidia dia hoy izy:
Salama maraina ny antony tsy mandeha amin'ny pejin-tsoratro ny pejiko fanamarihana hatramin'ny 8 aogositra.
Valiny tamin'i Nidia
Nintendo "manohy" mahazo namana ao amin'ny YouTube
Microsoft dia manao lavanty amin'ny Xbox One S ho fanomezam-boninahitra an'i Paul Walker